imaginary clouds: 2011
အချိန်တွေက ကုန်တာမြန်တယ်လို့ထင်မိတယ် ။ ကမ္ဘာတဝန်းက နိုင်ငံတွေမှာနှစ်သစ်ကူးတဲ့ အချိန်ရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေထဲက ၊ လှတဲ့ ၊ ဓါတ်ပုံပညာအရ ကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတချို့ကို သတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့ ဝက်ဆိုဒ် မှာကြည့်ခဲ့ဖူးတာကို အမှတ်ရနေမိတယ် ။ မနေ့တနေ့ကလိုပါပဲ ။
ရပ်ဝေးရပ်နီးမှာရှိကြတဲ့ မိဘ ဆရာသမားများ ၊ သူငယ်ချင်းရောင်းရင်း ၊ ဘလော့ရေးဖော်များ အားလုံး လာမယ့်နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွင်ကြပါစေ ၊ လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ။
Posted by icn2 at 21:49 No comments: Links to this post
Labels: drawings, wishes
ငါးဖယ်ချောင်းကျောင်း ( ကြောင်ခုန်ကျောင်း) ကို ကျနော်တို့ရောက်ချိန်မှာ မနက် ၁၀ နာရီလောက်ပဲရှိပါဦးမယ် ။ ဧည့်သည်တွေလာရင် ဆရာတော်ဘုရားက ဂလိုင် ခေါက်ပြီးကြောင်တွေကိုခေါ်ပါတယ် ။ ဧည့်သည်တွေအလာများပြီး ဧည့်သည်လာတိုင်း ခုန်ရပါများလို့ ကြောင်တွေကလည်း သိပ်မခုန်ချင်တော့ပါဘူး ။ ကြောင်ခုန်နေတဲ့ပုံကိုရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေထဲက ပုံသုံးပုံကိုတင်လိုက်ပါတယ် ။ သူတို့ကို ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့သူကလည်း မနည်းဘူးခင်ဗျ ။
Posted by icn2 at 22:01 No comments: Links to this post
Labels: ခရီးသွား, ကြောင်ခုန်ကျောင်း ( Ngwa Phe Chaung Monastery)
ဒီပုံက ရွှေအင်းတိန် ဘုရားဖူး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံးတင်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ် ။ စေတီပုထိုးတွေကြားထဲမှာ လူလည်းသိပ်မရှိတဲ့နေရာမှာ အသံမပေးဘာမပေးဘဲ ဘွားကနဲပေါ်လာတာပါ ။ ကျနော် ဟိုရိုက်ဒီရိုက်လုပ်ပြီး နောက်ဘက်လှည့်လိုက်တော့သူ့ကိုတွေ့ပါတယ် ။ ဟုတ်ပါတယ် ၊ သူကဧည့်သည်တွေလာရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် မော်ဒယ်လုပ်ပေးတဲ့ တိုင်းရင်းသူတယောက်ပါ ။ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးသွားရင် စေတနာအလျှောက် တခုခုပေးသွားကြပါတယ် ။
Posted by icn2 at 21:215comments: Links to this post
Labels: ခရီးသွား, ရွှေအင်းတိန် ( Shwe Indein pagoda)
ink on paper- icn2
Posted by icn2 at 18:32 No comments: Links to this post
ရွှေအင်းတိန်ဘုရား ဇောင်းတန်းဘေးမှာ ရှိတဲ့ စေတီပုထိုးတွေကို ရိုက်ထားတာပါ ။ တချို့ စေတီပုထိုးတွေက အခုမှတည်ထားပြီး ၊ ရှေးစေတီပုထိုး တွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။ အင်တာနက်ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ ရေတွေထဲမှာရှိတဲ့ စေတီပုထိုးတွေကို မရောက်ခဲ့ဘူး ။ ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ပုံတွေထဲက တချို့ကိုမူရင်းအတိုင်းတင်လိုက်ပါတယ် ။
Posted by icn2 at 13:037comments: Links to this post
“ ဘုရား ကျွန်တော် ၊ တောင်ကျွန်းပေါ်က ၊ ဆင်တော်တစ်စီး ၊ အမြီးငွေလိပ် ၊ လိပ်သည့်သင်ဖြူး ၊ ဖြူးသည့်လေညင်း ၊ သည်းသည့်အမဲ ၊ မည်းသည့်မီးသွေး ၊ သွေးသည့် နံသာ ၊ သာသည့် လမင်း ” စသဖြင့် အတောမသတ်နိုင်အောင် အလိုရှိတိုင်း ဆက်ပေးနိုင်သည့် လင်္ကာတစ်ပုဒ်လို ၊ ရွှေအင်းတိန် ဘုရားကိုသွားရင်း ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို စာဖြည့်ရင်း ၊ ခရီးသွားတဲ့အခါ အစီအစဉ် ဆွဲတဲ့ အကြောင်းအရာလေး ခေါင်းထဲရောက်လာပါတယ် ခင်ဗျ ။
အလုပ်ထဲက အသိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တယောက်အကြောင်းပါ ။ သူက အရှေ့တောင် အာရှက နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ် တစ်ခုကနေ ပထမတန်းစားကလတ်စ် (First class) နဲ့ ဘွဲ့ရလာသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ အလုပ်မှာ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖိုင်လေးကို သူ့ကွန်ပျူတာထဲရှာရင်း သူခရီးသွား တုန်းက ဆွဲထားတဲ့ ခရီးသွားအချိန်စာရင်း ၊ ပါဝါပွိုင့် စလိုက်လေးကို သူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကတွေ့သွားကြတယ် ။
သူက ခရီးသွားတဲ့ ရက်တွေမှာ မနက် ၇ နာရီ အိပ်ယာထ ၊ ရေချိုး ၊ သန့်စင်ခန်းဝင် ၊ ၈ နာရီ မနက်စာစား ၊ ၉ နာရီ ဘာလုပ် ၊ ၁၀ နာရီ ဟိုအရောက်သွား ။ ၁၁ နာရီ ထမင်းစား ၊ ၁၂ နာရီ ဘာလုပ် ဆိုပြီး အသေးစိတ် အစီအစဉ်တွေအပြင် တနေ့ကို သုံးရမယ့် ငွေ ၊ ဘတ်ဂျတ် ၊ ပိုသုံးမိရင် ဘယ်လောက်ထိပဲသုံရမယ် ၊ စသဖြင့် အသေးစိတ်တွေ ပါတဲ့ အချိန်စာရင်း ။ တွေ့မိတဲ့သူတွေက သူ့ ခရီးစဉ် အချိန်ဇယားကို ကြိုက်သူလည်းရှိ ၊ မကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိ ။ ချီးကျူးသူလည်းရှိ ၊ ပြုံးသူလည်းရှိ ။ ဒို့ကတော့ ခရီးသွားရင် ဘာမှ သိပ်မစဉ်းစားဘူး ။ ရောက်တဲ့အချိန်ဟာရောက်တဲ့အချိန် ၊ ထမင်းစာလို့ ထမင်းစားတဲ့ အချိန်ဟာ ထမင်းစားတဲ့အချိန်ပဲ ။ package တွေ schedule တွေ လာမလုပ်နဲ့ carefree ပဲ ။ တခြား ကိစ္စတွေကို ခရီးသွားချိန် မီးခလုတ်ပိတ်သလို ပိတ်ထားခဲ့တာ စသဖြင့် ..
“ ကြံစည်တိုင်းလည်း ဖြစ်မလာဘူး ၊ ဘဝကို သီချင်းလုပ်ဆိုချင်တယ်” ဆိုတဲ့ ဆရာတွေကတော့ ကားပျက်ရင် အဲသည့်အတွေ့အကြုံက သိပ်ကောင်း ၊ ဖန် တား စ တစ် ပဲ ။ အခန်းမရရင် ရတဲ့အခန်းမှာနေ မရဘူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေရမယ် ဆိုတဲ့သူတွေက တစ်အုပ်စု ။
တဘက်ကလည်း တည်းမည့်နေရာရောက်ရင် ၊ မီးလောင်ရင် ထွက်ပြေးရမယ့် အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တံခါး အလွယ်တကူဖွင့်လို့ရရဲ့လား ၊ အဲဒီ့တခါးကို တယောက်ယောက်က အပြင်ကနေ သော့ခတ်ထားသလား ၊ တံခါးဘယ်နှပေါက်ရှိသလဲ ၊ အရေးပေါ်တံခါးပေါက် နဲ့ ကိုယ့်အခန်းဘယ်လောက်ဝေးသလဲ စတာတွေကို တည်းမယ့်နေရာရောက်ရောက်ခြင်း စစ်တဲ့သူက တစ်စု ။ ဒီကိစ္စအတွက် မေးခွန်းအတွက် အမှန်အမှားမရှိပါဘူး ၊ စိတ်ထဲထင်တာကိုသာ အမှတ်ခြစ်ခဲ့လိုက်ပါ ဆိုသလိုမျိုး။ ခရီးတူတူသွားဖူးမှ လူတယောက်အကြောင်းကို ပိုသိတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို စမ်းစစ်ချင်သူတွေလည်းရှိမှာပဲ မဟုတ်လား
စာစီစာကုံးရေးသလို နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ကဗျာဆရာကြီး ဦးအောင်ချိမ်ရဲ့ ကဗျာလေးကိုကိုးကားလိုက်ပါတယ် ။
Posted by icn2 at 15:52 No comments: Links to this post
Labels: ခရီးသွား, ဟိုဟိုဒီဒီ
ဟုတ်ကဲ့ ။ ရွှေအင်းတိန် ဘုရား ငါးရက်ဈေးနဲ့ ကြုံလို့ ဈေးထဲပတ်ကြည့်ပါတယ် ။ ကျနော်ကဓါတ်ပုံတချို့ရိုက်ပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များပါတယ် ။ သူတို့တတွေက ဒေသခံ တွေရဲ့ ပုံတွေကို သေချာ အနီးကပ်ရိုက်ကြပါတယ် ။ ကျနော်တို့ကို လိုက်ပို့ပေးတဲ့ အကိုက ဝါးတောဘက်ကနေ သွားဖို့ အကြံပြုပါတယ် ။ အဲသည့်ဘက်မှာ ချောင်း နဲ့ ချောင်းရေကျနေတဲ့ တောင်ကုန်း ( ရေတံခွန်သေးသေးလေး) တစ်ခုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
Posted by icn2 at 23:50 No comments: Links to this post
ယခုရက်ပိုင်း မိုးများ အဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတယ် ။ သေနတ်များ နှင့် နှင်းဆီများ အဖွဲ့ရဲ့ နိုဝင်ဘာမိုး နှင့်တော့ မဆက်စပ်ပါ ။ အေးအေးဆေးဆေးလမ်း ဆိုတဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ဖတ်ဖြစ်တယ် ။ ကဗျာဆရာ ခိုင်မြဲကျော်စွာ ရဲ့ ကဗျာစာအုပ် “ အေးအေးဆေးဆေးလမ်း” ထဲကပါ ။
မန္တလေးတောင် ဘုရားဇောင်းတန်းမှာ ရိုက်ခဲ့တာပါ ။
Posted by icn2 at 17:25 No comments: Links to this post
ရွှေအင်းတိန် ဘုရားရောက်တဲ့နေ့က ငါးရက်ဈေးနေ့ ဖြစ်နေပါတယ် ။
Posted by icn2 at 22:58 No comments: Links to this post
ရွှေအင်းတိန် လှေဆိပ်မှ စားသောက်ဆိုင်များ
ဟုတ်ကဲ့ ။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆရာကြီး “ ဆရာကြီး ဂျက် ( ဂျက် ကွမ်းခြံကုန်း ) ” ရဲ့ စာလေးကို ကိုးကားပါရစေ ။
မဟေသီ ၊ သြဂုတ်လ ။၂၀၁၀ မှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆရာကြီး ဂျက် ရဲ့ “ကျွန်ုပ် နှင့် ပါတော်မူဇာတ်လမ်းများ” ကယ်လီဖိုးနီးယား မိုနိုလော့ဂ်ထဲကပါ ခင်ဗျ။
Posted by icn2 at 15:56 No comments: Links to this post
Labels: ခရီးသွား, အင်းလေး (Inle), ရွှေအင်းတိန် ( Shwe Indein pagoda)
ချောင်းရိုးလေးအတိုင်း နာရီဝက်လောက် သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ရွှေအင်းတိန် ဘုရား လှေဆိပ်ကိုရောက်ပါတယ် ။ ကျနော်တို့ ရောက်သွားချိန်မှာ ဘုရားဖူးဧည့်သည်တော်တော်များရောက်နှင့်နေကြပါပြီ ။
Posted by icn2 at 14:08 No comments: Links to this post
ရွှေအင်းတိန် ဘုရားသို့ သွားရာလမ်းမှာ တွေ့ရသော ဘုန်းကြီးကျောင်း
Posted by icn2 at 13:31 No comments: Links to this post
Labels: ခရီးသွား, အင်းလေး (Inle)
အင်းလေးမြေပုံ ကို သည်နေရာကယူပါတယ် ။
မနက်စာအတွက် ရှမ်းခေါက်ဆွဲအရည်ဖျော် ကိုစားကြတယ် ။ စားလို့ကောင်းတယ် ။ မနက် ၇ နာရီခွဲ ၊ ၈ နာရီလောက်ဆိုရင် တည်းခိုသူတော်တော်များများ အပြင်ကို စထွက်ကြတယ် ။ ကျနော်တို့ကတော့ ၉ နာရီလောက်မှ စထွက်တယ် ။
Posted by icn2 at 12:095comments: Links to this post
Posted by icn2 at 01:222comments: Links to this post
Labels: ခရီးသွား, ညောာင်ရွှေ ( Nyaung Shwe )
Egon Schiele ရဲ့ ရေးဟန် နဲ့ figurative ပုံတွေကို ကျနော်ကြိုက်ပါတယ် ။ သူ့ပုံတွေကို ကျန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် ၊ နှစ်နှစ်လောက်က ကူးဆွဲလေ့လာဖူးပါတယ် ။ အဲသည့်ပုံတွေထဲက ပုံ သုံးပုံကိုပြန်တင်လိုက်ပါတယ် ။
Posted by icn2 at 13:43 No comments: Links to this post
Labels: art, drawings, figurative
မနေ့ကတင်တဲ့ တောင်ကြီးဈေး ပိုစ့်မှာ မမီးမီးငယ် က “ ငါးထမင်းပုံလေး မပါဘူးလား ” ဟုမှတ်ချက်မှာမေးသွားပါတယ် ။ ဒါနဲ့ ညောင်ရွှေဈေးထဲမှာ ဗိုက်ဆာလို့ မုန့်စားရင်း ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကို ဒီပိုစ့်မှာဆက်တင်လိုက်ပါတယ် ။
Posted by icn2 at 00:564comments: Links to this post
Posted by icn2 at 00:482comments: Links to this post
ညောင်ရွှေဈေး ထဲကိုလည်း ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။ ညောင်ရွှေ ငါးရက်ဈေးလို့လည်းခေါ်ပါတယ် ။ ဈေးထဲမှာလည်း ဓါတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို တွေ့ပါတယ် ။ ကျနော်ကတော့ ဗိုက်ဆာလို့ မုန့်ဆိုင်ရှာပါတယ် ။ မုန့်ဆိုင် တော်တော်များများက အမိုးနိမ့်နိမ့်လေးနဲ့ သစ်သားတိုင်တွေနဲ့ မျက်စိထဲလှနေပါတယ် ။ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံနှစ်ပုံရိုက်လာခဲ့ပါတယ် ။
Posted by icn2 at 00:39 No comments: Links to this post
ဟုတ်ကဲ့ ။ အင်းလေးကန်ထဲကိုသွားဖို့ တောင်ကြီး ကနေ ညောင်ရွှေကို ပြန်မောင်းပါတယ် ။ တစ်နာရီ ကျော်ကျော်ကြာမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ညောင်ရွှေမြို့သို့သွားတဲ့ လမ်းဟာ ကောင်းပါတယ် ။ လမ်းမှာ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်တွေကို စက်ဘီးတွေ နဲ့တွေ့ပါတယ် ။ အေးအေးလူလူ စက်ဘီးလေးစီးပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်နေကြပါတယ် ။ လိုက်ပို့တဲ့ အကို အပြောအရ “လုံခြုံမူ” ရှိပါတယ် ။
Posted by icn2 at 00:112comments: Links to this post
Labels: art, drawings, photography, video, ခရီးသွား, အင်းလေး (Inle)
Chinatown မှာရောင်းတဲ့ သစ်ပေါင်းပိုး အကောင်လေး တွေကိုဆွဲထားတာပါ ။ watercolor and ink on paper.
Posted by icn2 at 21:56 No comments: Links to this post
Labels: drawings, watercolor
ညဈေးတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ထားရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ ပန်းချီဆရာကြီး ( ဦး ) ကြီးမြင့်စော ရဲ့ ညကားတွေကို ကြည့်ပြီးငြိသွားလို့ သူ့လိုလိုက်ဆွဲဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ ကိုးကားလို့ရအောင်ပါ ။
ပန်းချီဆရာကြီး (ဦး) ခင်မောင်ရင်က သူ့ပန်းချီကားတွေကို ညဘက်မှာလည်းဆွဲတယ်လို့ပြောတယ် ။ ညမီးရောင်အောက်မှာ သူရေးဆွဲတဲ့ အခါ ၊ သူရွေးခြယ်လိုက်တဲ့အရောင်ဖွဲ့စည်းမူ တွေက ၊ နေခင်းဘက် ပုံမှန်အလင်းရောင်အောက်လည်းရောက်ရော တမူထူးတဲ့ အရောင်ရွေးခြယ်မူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ် ။
ကျနော့်အတွက်တော့ ညဘက် ပုံဆွဲရင် မျက်စိညောင်းလာပြီး အိပ်ချင်လာရောခင်ဗျ ။ :)
Posted by icn2 at 21:45 No comments: Links to this post
Labels: art, Chinatown (Yangon), oil
နောက်ဆုံးအကြိမ်ဝယ်တဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ မြန်မာကဗျာစာအုပ်လေး ငါး ခြောက်အုပ်လောက်ပါတယ် ။ ကဗျာဖတ်ရတာကြိုက်တဲ့သူမလို့ ကဗျာစာအုပ်တွေ ကိုဝယ်ဖြစ်တယ် ။ ကဗျာဆရာ တွေရဲ့ လုံးချင်းကဗျာစာအုပ်တွေကို ဝယ်သိမ်းလေ့လဲရှိတယ် ။ နာမည်ကျော် ကဗျာဆရာကြီးတွေရဲ့စာအုပ်တွေကတော့ တချို့ဆိုင်ကြီးတွေမှာ သိပ်မရှိတော့ ။ ကုန်သွားတာဖြစ်မယ် ။ ကဗျာဆရာ တဦးခြင်းအလိုက် ၊ ကဗျာစာအုပ်တွေထွက်လာတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကဗျာဆရာလက်ရာကို တစုတဝေးတည်း အလွယ်တကူဖတ်လို့ရလာတယ် ။
( ဒါပေမယ့် အခုချိန်ထိ ဝယ်ထားပြီးကဗျာစာအုပ်တွေကို မဖတ်ရသေးဘူး ။ ဟိုလှန် ၊ ဒီလှန် နဲ့ သေချာမဖတ်ဖြစ်သေးဘူး ။ ဖတ်စရာကဗျာများလာတော့ ( အွန်လိုင်းကဗျာရော ၊ ပုံနှိပ်ကဗျာများပါ ) အကုန်သေချာဖတ်ဖို့ အချိန်များများလိုလာတယ် ။ အလုပ်ထဲမှာ အချိန်ကုန်တာများတော့ ကဗျာဖတ်ချိန် နည်းသွားပါတယ် ။)
ပန်းချီ ကိုနေမျိုးဆေး ရဲ့ ကဗျာ စာအုပ်ဒီဇိုင်း ၊ လှတယ် ၊ ဆွဲဆောင်မူရှိတယ်လို့ ခံစားရတယ် ။
Posted by icn2 at 20:57 No comments: Links to this post
Labels: art, book cover, poem
အမ တယောက်ရေးသလို ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်ကြည့်ရိုက်ရတယ် ။ ကြိုက်လားမသိ၊ မကြိုက်လားမသိ ၊ သူများ ဝမ်းတစ်ထွာအတွက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံကို ရိုက်ရတာ ။ တော်ကြာနေရိုက်ပေါက်တွေဖြစ်နေဦးမယ် ။
Posted by icn2 at 22:41 No comments: Links to this post
Labels: Chinatown (Yangon), ခရီးသွား
အင်းလေးကန် အတွင်းက ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များထားခဲ့သော စာအုပ်တချို့။
ရန်ကုန်မှာ သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်းစကားပြောဖြစ်ပါတယ် ။ သူက စာအုပ်တွေဝယ်ယူစုဆောင်းတယ် ၊ အဟောင်းတွေရော ၊ အသစ်တွေပါ ဝယ်စုတယ် ။ ကျနော်လည်း တချို့စာအုပ်တွေသူဆီကနေ ဌားဖတ်ဖူးတယ် ။
စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တချို့ အရင်လို အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ သူကပြောတယ် ။ အင်တာနက်ကနေ အီးဘွတ်တွေ ( အင်္ဂလိပ် ဝတ္ထုတွေ ၊ တခြား ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်) နဲ့ ကိုးကားစရာ စာများအလွယ်တကူရနိုင်တာကြောင့် အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုအဟောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တချို့အလုပ်မဖြစ်ဘူး လို့သူကပြောတယ် ။
Posted by icn2 at 22:19 No comments: Links to this post
Labels: Random photos, ဟိုဟိုဒီဒီ
ဟုတ်ကဲ့ ။ ကဗျာဆရာကြီး သုခမိန်လှိုင် ရဲ့ လက်နှိပ်ဓါတ်မီး ထိုးပြီးရေးတဲ့ကဗျာ စာအုပ်ထဲမှာလည်း ရန်ကုန် Chinatown မှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတစ်ပုံ ပါပါတယ် ။ ဝါသနာအရ ဓါတ်ပုံရိုက်သူ ကျနော့်အတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ သိပ်မလွယ်လှပါဘူး ။ အနီးကပ်လိုချင်တဲ့ ပုံတွေကျရင် ခွင့်ပြုချက်အရင်တောင်းပါတယ် ။ ခွင့်ပြုချက်ရမှ ရိုက်ခဲ့ပါတယ် ။
အောက်ကဓါတ်ပုံထဲက အကောင်လေးတွေကို သင်ပေါင်းပိုး ၊ သစ်ပေါင်းပိုး စသဖြင့်ခေါ်တယ်လို့ပြောပါတယ် ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း နာမည်အမှန်က ဘယ်လိုခေါ်မှန်းမသိဘူး ။ အဲသည့် အကောင်လေးတွေကို တချို့လည်း မစားရဲပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဘီယာ နဲ့ ထိုင်မြည်းတဲ့လူလည်းရှိပါတယ် ။ ဗန်းထဲထည့်ထားတဲ့ အကောင်တွေက အရှင်တွေဖြစ်ပြီး ၊ ငြိမ်ငြိမ်မနေတတ်ဘဲ ၊ လူပ်စိလူပ်စိ လုပ်နေတတ်တဲ့သဘာဝကြောင့် မစားရဲဘူးလို့ပြောတာကြားဖူးပါတယ် ။
Posted by icn2 at 12:51 No comments: Links to this post
မြန်မာကဗျာဆရာတယောက်က လမ်းမတော် ၊ ၁၉ လမ်း ၊တဝိုက်ကို ကဗျာဖွဲ့ဖူးပါတယ် ။ ရန်ကုန်မြို့ ချိုင်းနားတောင်း ဟာ ညနေဆိုရင် နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေ ၊ တိုးဂိုက်တွေ ၊ ရန်ကုန်သူ ၊ ရန်ကုန်သားများနဲ့ စည်ကားနေပါတယ် ။ ကျနော်တို့ ရောက်သွားချိန်မှာလည်း နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တော်တော်များများကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။ အစားအသောက်ပုံတွေ နဲ့ တခြားထင်ရာမြင်ရာတွေ ရိုက်လာခဲ့ပါတယ် ။
Posted by icn2 at 15:48 No comments: Links to this post
ရွှေအင်းတိန် ဘုရားကို ရောက်တဲ့ အခါ ပါးစပ်ရာဇဝင် တစ်ခုကြားရပါတယ် ။ ရှေ့ဖြစ်ကိုကြိုတင်တွက်ချက်ဟောပြောနိုင်တဲ့ ရှေးဟောင်းကျမ်းတစ်စောင်ဟာ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။ အဲသည့် ကျမ်းကို တွေ့သူတယောက်က ဘယ်လို့အသုံးချရမယ်မှန်းမသိလို့ တခြားတယောက်ကိုရောင်းလိုက်ပါတယ် ။
Posted by icn2 at 14:41 No comments: Links to this post
Labels: art, ခရီးသွား, ယုံတမ်းစကား, အင်းလေး (Inle)
Posted by icn2 at 13:22 No comments: Links to this post
အင်းလေးအရုပ်များ ( color pencils and pen on paper) icn2
အင်းလေး ဒေသမှာ ရောင်းတဲ့ အမှတ်တရ အနုပညာလက်ရာတွေ ၊ ရူခင်းတွေ နဲ့ လူပုံတွေ အားလုံးကိုပေါင်းပြီးပုံဆွဲဖို့ကြိုးစားထားတဲ့ပုံတွေထဲက ပုံတချို့။ ပထမဆုံးပုံနာမည် ( အင်းလေးက အရုပ်များ)
Posted by icn2 at 23:33 No comments: Links to this post
Caricature နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာကာတွန်းဆရာ ဇိုဇမ် ပြုစုရေးသား ဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်မှာ အခြေခံရေးဆွဲနည်းတွေပါလို့ ကျနော်ကြိုက်ပါတယ် ။ အခုတလော ကျနော်ကြိုက်နေတဲ့ ကာတွန်းဆရာကို ရှယ်လုပ်ချင်ပါတယ် ။ Russ Cook ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ ရဲ့ဆိုဒ်က
Electronics Engineering ကိုလေ့လာနေသူများကိုးကားတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုကို သူငယ်ချင်းတယောက်ကပေးလို့ ရှယ်လိုက်ပါတယ် ။ တော်တော်များများသိကြပါတယ် ။ မသိသေးသောသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ် ။ Cornell
သူ့လက်ရာတွေကို ကျနော်ကြိုက်ပါတယ် ။ Blog ရော website ပါ လွယ်လင့်တကူသွားနိုင်ပါတယ် ။ www dot owenfreeman dot com ဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by icn2 at 23:48 No comments: Links to this post
Posted by icn2 at 22:17 No comments: Links to this post
ရက်ကန်း ရက်တဲ့နေရာကို သွားကြည့်ကြတယ် ။ ကျနော့်အတွက်တော့ တီဗီမှာ ခဏ ၊ ခဏ မြင်နေရလို့ စိတ်ဝင်စားမူသိပ်မများပါဘူး ။ အဲသည့်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမတွေ ၊ ကြီးဒေါ်တွေက သဘောကောင်းပါတယ် ။ ရေနွေးတွေ တိုက်ပါတယ် ။ လက်ဖက်စားပါဦး ဆိုပြီးဧည့်ခံပါတယ် ။ အင်းထဲကို ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ဖူးတာဆိုတော့ ရယ်ကြတယ် ။
ကျနော်ကို ရက်ကန်းယက်ပြမယ်လို့ပြောတယ် ။ ကျနော်လည်း အားနာတာနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေပဲလှည့်ပတ်ရိုက်လာတယ် ။ ဘယ်ပစ္စည်းက ၊ ဘာမှန်းမသိဘူး ။ သူတို့ကရှင်းပြတယ် ။ အခုဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူး ။ :)
Posted by icn2 at 21:40 No comments: Links to this post
Labels: drawings, သူတို့စာ ၊ သူတို့စကား
Posted by icn2 at 21:18 No comments: Links to this post
Labels: ခရီးသွား, မင်းကွန်း ( Min Gun)
အင်းလေးအမှတ်တရ အနုပညာ လက်ရာ ပိုစ် မှာ ဓါးမေ့ကျန်ခဲ့လို့ ၊ ဓါးပုံ တစ်ပုံထပ်တွေ့လို့တင်လိုက်ပါတယ် ။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ဖြစ်လို့ကတော့ လူနာဗိုက်ထဲ ဓါးမေ့ကျန်ခဲ့လို့ဆိုရင် ပြီးပြီ ကိစ္စ။ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေက ဓါးတွေလည်းဝယ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ် ။
Posted by icn2 at 23:56 No comments: Links to this post
Labels: art, ခရီးသွား, အင်းလေး (Inle)
ကဗျာဆရာကြီး Dylan Thomas ပြောစကားများ : Somebody's boring me. I think it's me.
Posted by icn2 at 23:20 No comments: Links to this post
Labels: သူတို့ စကား
Posted by icn2 at 22:422comments: Links to this post
Labels: ခရီးသွား မင်းကွန်း
Posted by icn2 at 22:23 No comments: Links to this post
Labels: ခရီးသွား, စစ်ကိုင်း
drawing ( အင်းလေး အမှတ်တရ အနုပညာလက်ရာ နောက်ဆက်တွဲ)
အမှတ်တရအနေနဲ့ဝယ်လာတဲ့ ရသေ့ကြီးအရုပ် အကြောင်းရေးရင်း သူ့ကို ပထမဦးဆုံး ဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့ ပန်းပုပညာရှင်ကို သိချင်တဲ့အကြောင်းရေးခဲ့ပါတယ် ။ အဲသည့်နောက် အရုပ်ရဲ့ အချိုးအစားတွေအကြောင်း ခေါင်းထဲရောက်လာပြီး ၊ အင်ဂျင်နီယာများ drawing ဆွဲတဲ့အခါ scale (Label) ထည့်၊ တပ်သလိုမျိုးစာသားလေးထည့်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးရလို့ အလွယ်တကူ ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့ မေတ္တာ ၊ ဂရုဏာ စတဲ့စကားလုံးများကို ထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ် ။ စကားလုံးတွေကို လက်ရေးနဲ့ရေးရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် ။
Posted by icn2 at 22:03 No comments: Links to this post
နောက်တကြိမ်သွားဖို့ သိပ်မလွယ်ကူတဲ့နေရာကိုရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ဓါတ်ပုံတွေအမှတ်တရရိုက်ခဲ့ပါတယ် ။ အင်းလေးကန် အတွင်းမှာရှိတဲ့ ပန်းပု၊ ပန်းပဲ လုပ်ငန်းခွင်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျနော် ပန်းပုရုပ်ကလေးတွေ ၊ ရုပ်သေးရုပ်ကလေးတွေကို သဘောကျပါတယ် ။ ကြိုက်တယ် ။ အဲသည့်လုပ်ငန်းခွင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေတော်တော်များများရောက်နှင့်နေကြတာကိုတွေ့ပါတယ် ။ သူတို့တတွေကလည်း ဓါတ်ပုံတွေ တဖျပ်ဖျပ် ရိုက်နေကြသလို မီးအပူပေး၊ ၊ မီးကျွေးထားတဲ့ သံ ( ကြေး) ပြားတချောင်းကို ပန်းပဲဆရာတို့က တဖြောင်းဖြောင်းထုနေပါတယ် ။ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့သူရော ၊ ပန်းပဲဆရာတွေရော သူတို့ဘာသာအလုပ်ရူပ်နေကြပါတယ် ။
Posted by icn2 at 21:01 No comments: Links to this post
Posted by icn2 at 21:31 No comments: Links to this post
Posted by icn2 at 21:05 No comments: Links to this post
Posted by icn2 at 20:292comments: Links to this post
မန္တလေးမြို့ ရဲ့ နာမည်ကျော် စားသောက်ဆိုင်တွေထဲကတစ်ဆိုင် ၊ ဗထူးကွင်းမြီးရှည် ။
Posted by icn2 at 20:082comments: Links to this post
မန္တလေး- စစ်ကိုင်း လမ်းမပေါ် မှာ ပုဇွန်တွေကို ဗန်းနဲ့ထည့်ပြီးရောင်းတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ ပုဇွန်ဘယ်ဈေးလဲ ၊ မန္တလေးမြို့ထဲမှာထက် ထက်ဝက်သက်သာပါတယ်ဗျာ ။
Posted by icn2 at 18:16 No comments: Links to this post
Labels: ခရီးသွား, စစ်ကိုင်း, မန္တလေး
မြစ်ဆိပ်ကိုသွားတဲ့လမ်း မှာ အုတ်ခံလေးနဲ့ဆောက်လုပ်လုဒါန်းထားတဲ့ ရေကုသိုလ် ၊ သောက်ရေအိုးစင်လေးကိုတွေ့ရပါတယ် ။ နေကလည်းသာ ၊ သစ်ပင်လေးတွေကလည်း စိမ်းစို ၊နဲ့သာယာလှတယ် ။ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်တယ် ။
Posted by icn2 at 23:342comments: Links to this post
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ (Abstract Expressionism) ပန်းချီလူပ်ရှားမူထဲက ကမ္ဘာကျော်ပန်းချီဆရာကြီးတွေက ပန်းချီဆွဲရာမှာ စုတ်တံကိုထွန်းကွပ်နေရမူ အောက်ကနေကင်းလွတ်အောင်၊ သူတို့ရေးဆွဲတဲ့ ပန်းချီကားတွေကို ပန်းချီကားဘောင်ခွေ (ခတ်)တဲ့အပြုအမူတွေဆီကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်လို့ ဖတ်မှတ်ဖူးပါတယ် ။ သူတို့ နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် စုတ်တံတစ်ချောင်းကို တမူထူးခြားစွာထိန်းဆွဲတဲ့ သူတယောက်ကို ရွှေအင်းတိန်ဘုရားဖူးရင်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။
အမတယောက်ကလည်း ရွှေအင်းတိန် ဘုရားဇောင်းတန်းကိုရောက်ရင် စုတ်တံကို လက်နဲ့ ထိန်းမရေးတဲ့ (ယွန်းထည်ပန်းချီ) ပန်းချီဆရာတယောက်ကိုတွေ့အောင်ရှာကြည့်ဖို့ ကျနော်တို့ကိုသေချာမှာလိုက်ပါတယ် ။
Posted by icn2 at 21:21 No comments: Links to this post
Labels: art, movie, ခရီးသွား